Ungachengetedza sei nhanho yakanaka muChirungu… iwe usina mukana wekutaura?
Yakatumirwa ne Tranquillus | Juil 13, 2021 | Pamusoro pewebhu
Dzidza kutaura mutauro zvakanaka, hazvina kuita sekudzidzira kuchovha bhasikoro: zvinogona kukanganikwa. Saka, maitiro ekuchengetedza yako nhanho muChirungu kana iwe usingawanzo mukana wekudzidzira mutauro waShakespeare ? Kunyangwe uchigara wega pachitsuwa chegwenga kana muguta guru, taisa pamwechete rondedzero pfupi yenzira dzakapfava dzekusvika padanho rakanaka muChirungu… pasina kushanda nesimba.
Dzese idzi matipi dzinofungidzira kuti wakakwanisa kutaura Chirungu zvakatsetseka pane imwe nguva muhupenyu hwako. Ndokureva, kugadzikana zvakakwana kuti unzwisise mutauri weChirungu uye nekumupindura usingatsvage mazwi ako panguva yehurukuro, ingave hupenyu hwezuva nezuva kana chidzidzo chakaomarara zvine mutsindo. Kana iwe uchikwanisa kunyora yako biography muChirungu, unogona kutaura Chirungu zvakanaka. Kunyangwe iwe usingakwanise kupfuudza iyo ratatouille nzira nekuti hauzive mazita echirungu ezvese zvigadzirwa (eggplant, zucchini, madomasi, gariki, mhiripiri, mhiripiri, mhiripiri pfupi, munyu, 'bouquet garni').
Hechino chingangoita chakazara rondedzero yedzese nzira dzinogoneka dzekuchengetedza yako nhanho yeChirungu, kunyangwe kusimbisa mazwi ako
Ungachengetedza sei nhanho yakanaka muChirungu… iwe usina mukana wekutaura? Gumiguru 15th, 2021Tranquillus
VERENGA Tsvaga hunyanzvi network
pashure[BACK TO SCHOOL] - Gadzirira kudzokera kwako kubasa izvozvi!
zvinoteveraChiPutukezi madudziro: dzidza kutaura Chiputukezi kunge wekuzvarwa
Kutendeseka kwesainzi mumabasa ekutsvagisa
Kushinga kushanda muindasitiri yeramangwana
Personal kudzidziswa account (CPF): ziva kodzero dzako